Fishing lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Play maimaim-poana amin'ny aterineto lalao Fanjonoana dia mahaliana ny fanehoana rehetra, na ianao mpankafy ny mihantona avy, na tia ny mipetraka amin'ny tehina jono tsindraindray. Izany ampahany fibodoana ny ankizivavy na dia rehefa misy raharaha lavo, satria tena filan'ny nofo, hook ao amin'ny trondro eo amin'ny lelam-pitana sy nampakatra ny misambotra an-tanety. Ao amin'ny kilalao dia misy asa isan-karazany: hahazo trondro sasany ho azy ireo, ary mahazo ny hevitra, na manao asa hafa.
Ilay mpampianatra trondro
Ny jono miaraka amin'ny namana
Mandehana any amin'ny jono
Ny FisherCat Online
Andeha isika fanjonoana
Fanjonoana amin'ny Pa
Ranomasina Deep Fishing Mania
Andao Mandehana Fishing
Mandeha ny jono
Farihy Lake 1. 5
Misambotra ny andro
Ny jono kely
Pesca, con Max
Ranomasina Azure Fishing
Andao handeha aloha
Looney vaovao manga Battuta Di Pesca
Lalao Fishing tamin'ny Category:
Fihazana sy ny fanjonoana
Farany Fishing lalao
Fanjonoana Willow Pond
Fanjonoana anaty rano lalina
Kitiho ny jono
Lasa ny jono
Fanjonoana biby goavambe
Jono sy tsipika
Fanjonoana an-dranomasina misokatra
Fanjonoana Star an'i Nanami
Puzzles Sliding Fisherman
Lalao Nastya Fishing
Nastya Dinosaurer Digging Bone
Lalao Online Rehetra Fishing lalao
Ho an'ny trondro?
Oh, izany fanjonoana, oh, ireo mpanarato! Izy ireo tsy leo, indrindra fa rehefa miresaka momba ny fanjonoana-bitan'ny. Toa tsy ny olona rehetra fotsiny naka ny lelam-pitana ny besisika sy goldfish tratra, izay hahatanteraka ny faniriana rehetra, ary na dia niverina azy indray, toy ny angano Ny Mpanarato sy ny Golden Fish.
Tantara ny mpanjono - dia ny tantara manontolo, nasiana zavamanitra mampahatsiro azy amin'ny fihetseham-po sy ny fihetsika. Tena faly izy ireo, ary andevozin'ny nandritra ny tantara fa ny antsasaky ny trondro miakatra avy amin'ny dimy ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo kilao, ary roa-polo santimetatra trondro be aloha ny telo-polo, dia efa-polo, ary farany lasa efa ho lava metatra poisson-chat.
Ny ririnina fanala? Fishing Games dia hanampy mba hitoerany ela any rehetra toetr'andro!
ny trano misy azy isika rehetra ny mpanjono vazan-trano nipetrahan'ny fitaovana sy ny jono gazety, sy ny trondro mizana mety ho hita fa ao amin'ny toerana tsy ampoizina indrindra. Mpanarato - mpilaza tantara lehibe, izay tsy mino, fa tsy nanahy, satria ny tenany tsy hisalasala ny firaiketana amin'ny marina, na dia hainareo ny mandainga. Fotsiny, dia mba doha fa raha ny tenany manomboka tsy mino izay rehetra resaka. Ary rehefa terena mba reraka avy fahasorenana amin'ny rindrin-trano ny an-trano, na any am-piasana, mba hanampy azy ireo maika hanatitra hilalao ny mpanjono lavitra, izay avy tamin'ny farany ny nofy marina momba ny fitrandrahana manan-karena. Manana ny tsara foana valan-javaboary, fa amin'izany dia misy foana isan-karazany ny trondro. Isika mba hamitahana azy manokana sy ny fisaraham-panambadiana ho anao ny fanatanjahan-tena tsy toa mankaleo ho anao. Manomana ny jono tenany ho avy amin'ny tolo-kevitra fangaron, na mividy vonona-natao, mifidy fanjonoana tsorakazo sy ny nihodidina teo ny ranonorana, manana seza ao amin'ny morontsiraka tsara tarehy sy Niantoraka tackles ho amin'ny fitaratra ambonin'ny farihy. Azo antoka dia hankafy sy ny manodidina rivo-piainana, izay ny fototra feon'ny mampahatsiahy ny bibidia. Ny trondro dia vonona foana ny hivarotra sy ny vola mba hividianana fitaovana vaovao, ary mety na dia mandamina ny fifaninanana amin'ny hafa mpanarato.
no fanomezam-boninahitra ny fomban-drazana
Ny olona nianatra ny fanjonoana tamin'ny andro fahiny, ary izany no fomba iray mba hamahanana ny fianakaviana na ny firenena. Hazo tsy mbola misy, ary ny bibidia ny olona Nanam ela pointy tapa-kazo, manipy azy ireo toy ny lefona na fotsiny misambotra ny rembiny amin'ny niteraka tànany. Fanjonoana lalao an-tserasera ny sasany mitondra anareo indray ho an 'ireo fomban-drazana sy ny famatsiana fitaovam-piadiana voalohany tamin'ny andron'ny fitaovam-piadiana, mba hampisehoana ny fomba nijery teo aloha.
Sa mankany ahy avokoa, Ka dia hisambotra ampiny ny tambajotra. Ny sambo efa tany an-dranomasina, ary nanomboka ny asany. Raha mifidy ny hilalao ny lalao jono toy izany ihany no tsy afaka hahazo ny faobe fiovana, fa trondro lehibe kokoa, toy ny antsantsa. Arakaraka mponina ireo hahazo ny ranomasina sy ny ranomasina, ny tombony bebe kokoa ianao dia.
Ny mpanjono mahery fo afaka scuba Manitrika ka hatrany ambany sy ny mpanjono milalao maimaim-poana amin'ny aterineto, mitondra ny harpoon. Ataovy ao an-tsaina fa ianao amin'ny faritra vahiny, fa ny trondro ny singa, ary mailamailaka kokoa. Raha tsy te-hibebaka hiala amin'ny mpanjono ny sakafo hariva, aza adino ny mijery ny manodidina. Nandritra ny lalao amin'ny fakan-tsary fanjonoana basy, dia afaka hisambotra ny hatsaran-tarehy ny fampiasana ny sary mareva-doko.